Fisandratana 2030 : Mahaliana ireo tanora -
AccueilRaharaham-pirenenaFisandratana 2030 : Mahaliana ireo tanora
Tonga maro nihaino ny famelabelarana nataon’ny filoham-pirenena momba ny vinan’ny Fisandratana 2030, ny mpianatry ny Oniversite Ankatso ny sabotsy lasa teo. Azo tarafina amin’ny fanontaniana maro napetrak’izy ireo, ny faharesen-dahatra amin’ny fampandrosoana maharitra an’i Madagasikara
Liana amin’ny fampandrosoana maharitra ny mpianatra eny Ankatso, porofon’ izany ny fahatongavan’izy ireo maro nihaino ny fanazavan’ny filoham-pirenena mikasika ny vinan’ny Fisandratana ny harivan’ ny sabotsy lasa teo. Tonga nanotrona izany ireo tanora maro mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo, niampy ny vondron’ireo tanora avara-pianarana. Novelabelarin’ny filoham-pirenena teny ampiandohan’ny fihaonana, ny asa vitany tao anatin’ny efa-taona nitondrany ny firenena izay fototry ny Fisandratana. “Miainga amin’ ny fanovana toe-tsaina ny Fisandratana, fa tsy fotodrafitrasa irery ihany” hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Tsy vita irery ihany koa ny asa , satria ilaina ny fifanomezan-tanana amin’ireo tanora nahavita fianarana “ ilaina fifanomezan-tanana ny fampandrosoana, ary manana anjara lehibe amin’izany ianareo tanora manovo fahalalana ety amin’ny oniversite” . Noho ny fisian’ny sampam-pampianarana maro eny Ankatso, dia tsy nohadinoin’ny filoha ny nitanisa ireo sehatra hiaingana amin’ny fisandratana dia ny fambolena, indostria, fizahantany sns.
Nisintona ny sain’ ireo tanora manovo fahalalana eny amin’ ny anjerimanontolo ny filoha Hery Rajaonarimampianina , nandritra ny fampahafantarana ny Fisandratana. “Tokony hanana saina hanangana orinasa isika fa tsy zatra miandry , ahafahana mandray an-tanana ny ho avy rahampitso izany. “Sarotra tokoa ny manangana indrindra orinasa no resahina” hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fanazavany ny lalana nodiaviny. Notsiahiviny tamin’ izany ny filana mangahazo milanja 50 000 taonina, hanamboarana harona sachet mora levona. Tsy naharaka ny tolotra anefa ny tinady hoy ny filoha, satria eo ny tsy fisian’ny orinasa manampy ireo tantsaha. Notsiahivin’ ny filoham-pirenena nandritra ity fihaonana tamin’ny mpianatra Ankatso ity ihany koa ny fihaonany tamin’ny filoham-pirenena Mozambikanina, izay maniry ny mbola hampitombo ny fidiram-bolan’ny firenena amin’ny alalan’ny sehatry ny jono. Mahatratra 175 Tapitrisa Dolara ny vola ampidirin’ ny sehatry ny jono amin’ny firenena Mozambikanina ankehitriny, raha toa 2400 kilometatra ny fari-dranomasina hanjonoan’izy ireo. Ho antsika eto Madagasikara kosa hoy ny filoha dia efa 5000 kilometatra ny fari-dranomasina trandrahina, nefa dia zara raha 10 Tapitrisa Dolara ny vola miditra. Maro ireo mpianatra nametra-panontaniana tamin’ ny filoham-pirenena taorian’ny fanazavana, ary nahazo valiny teo noho eo avokoa.